China JHPRO JH-65 အရည်အသွေးမြင့်မားသော Heavy Duty 65mm 1520W / 1700W Heavy Duty Electric Demolition Jack Hammer စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Jiahao
JHPRO JH-230 အသစ်အိတ်ဆောင်ဓာတ်ဆီထောင့်ကြိတ်စက် ...
စူပါအနိမ့်ဆုံးအခြောက်ခံကွန်ကရစ် - JHPRO JH -...
Professional China 52cc ဓာတ်ဆီထည် - JHPRO JH -...
အရည်အသွေးကောင်းလှည့်သံတူ - JHPROJH-32A / 32B rota ...
Professional ဒီဇိုင်း Multi Speed ​​Angle Grinder - JHP ...
လက်ကား Angle Grinder Saw - JHPRO JH-230A EPA အက်ပလီကေးရှင်း ...
ကွန်ကရစ်ထိန်းချုပ်မှုဖြတ်စက်များအတွက်စက်ရုံဆိုင်များ - JHP ...
စက်ရုံစျေးပေါသောဓာတ်ဆီသုံးအမြန်ရေနံချက်စက် - JHPRO JH-58 ...
JHPRO JH-IE48-F စိုက်ပျိုးရေးတူးစက်စက် ...
Chisel-Bits လျှပ်စစ်ဖြိုဖျက်ခြင်း ၂ ခုပါသော JHPRO JH-150 ...
JHPRO JH-65 အရည်အသွေးမြင့်မားသော Heavy Duty 65mm 1520W / 1700W ...
JHPRO JH-4350AK NEW MODEL ဖြိုဖျက်သောသံတူ ၁၃ ...
JHPROJH-32A / 32B Rotary Hammer Drill 1350W / 1500W Sds ...
JHPRO JH-28A / JH-28B 850w / 1150W ROTARY သံတူ3နှင့်အတူ ...
JHPRO JH-65 အရည်အသွေးမြင့်မားသော Heavy Duty 65mm 1520W / 1700W Heavy Duty လျှပ်စစ်ဖြိုဖျက်ခြင်း Jack Hammer
JHPRO ဖြိုဖျက်သောသံတူကိုပိုက်ခြင်း၊ စက်တပ်ခြင်း၊ ရေပေးဝေခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအထူးပြုသည်။ သင့်ရဲ့ရေချိုးခန်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်လျှောတံခါးများတပ်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့သောလေးလံသောတာဝန်များအတွက်စွမ်းအားရှိသောစျေးနှုန်းချိုသာသောဖြိုဖျက်သောသံတူကိုသင်ရှာဖွေနေပါက JH65 သည်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
JH65 သည်လူမီနီယမ်ကိုယ်ထည်ဖြိုခွဲသောသံတူဖြစ်သည်။ ၄၅ * ၉၄ မီလီမီတာကြေးနီဝါယာကြိုးတပ်ဆင်ထားပြီး၊ လက်တွေ့တွင် ၁၅၂၀W နှင့် ၁၇၀၀W တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဆေးခန်းများရွေးချယ်ရန်အတွက်၎င်းသည်ခဲယဉ်းသောကျိုးနေသောကွန်ကရစ်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့်နှစ်ဆသောမော်တာသည်လုံခြုံမှုကိုမြှင့်တင်သည်။ JHPRO ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တန်းလျှပ်စစ်သံတူသည်အော်ပရေတာ၏အိပ်မက်ဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောစွမ်းအားဖြင့်မြန်ဆန်။ ကိုင်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ သံတူသည်အရည်အသွေးကောင်းသောစို့နှင့်သံအိတ်တို့ပါ ၀ င်သည်။
၁။ လေးလံသောတာရှည်ခံပြီးတာရှည်ခံဆောက်လုပ်ထားသောလျှပ်စစ်သံတူသည် ၁၅၂၀W / ၁၇၀၀W ပါဝါနှင့် 1900r / min သက်ရောက်မှုကြိမ်နှုန်း။ အားကောင်းသော core နည်းပညာသည်တောင်းဆိုမှုများစွာနှင့်ကိုက်ညီသည်။
၂.၅ သက်သာသောသက်ရောက်မှုစွမ်းအင်၏ 45 joules (၃၁ ပေါင်) သည်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေသည်။ ၁၉၀၀ BPM အလွန်လျင်မြန်စွာဖြိုဖျက်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးတွင်ခိုင်မာသောမျက်နှာပြင်များပျက်စီးခြင်း၊ ကွန်ကရစ်၊ ကျောက်၊ အုတ်၊ လမ်းဘေးစသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၃။ ဤလျှပ်စစ်ထုပ်သည်တူရိယာ ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်ပြီးရှေ့လက်ကိုင်ကိုအသုံးပြုသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ရော်ဘာ D-ပုံစံချုပ်ကိုင်မှုနောက်ဘက်လက်ကိုင်နှင့်အော်ပရေတာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချရန်တုန်ခါမှုကိုစုပ်ယူသည်။
4. ခိုင်မာသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူအစိုင်အခဲ insulator တွင်လည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခွံ။ လျင်မြန်စွာအပူဖြာများအတွက်ပိတ်ဆို့နှင့်အတူအကာအကွယ်အဖုံး။ ကေဘယ်လ်အမြစ်များရှိအုတ်ရိုးသည်စက်၏သက်တမ်းကိုမြင့်စေသည်။
JH-65 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါဝါ input ကို: 1520W
ကိရိယာကိုင်ဆောင်သူ - Hex.30mm
မော်တာ: 45 * 94mm
အတွင်းသေတ္တာ - သတ္တုသေတ္တာ
ပုံးပုံးအထုပ်: 71 * 17 * 30 ကို CM
ကဘ / GW: 14 / 21KG Hex point စက္ကူ: 30p * 400mm 1pc
Hex ပြားစို့: 1pc 30 * 400mm
Socket ခေါင်းကိုလိမ်ဖဲ့ခြင်း: 3pc
JH-65A အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
သတ်မှတ်ထားသောပါဝါ input ကို: 1700W
dual- ပစ္စတင်အလုပ်နှင့်အတူ, ဒါဟာမြင့်မားသောသံတူနှင့်သက်ရောက်မှုအင်အားရှိပါတယ်;
ကိုယ်ခန္ဓာကိုခိုင်မာစေရန် Spring Pad ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ပေါင်းစပ်ဖုန်မှုန့်ကာကွယ်မှုနှင့်အတူ 6.HEX tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ;
7. အလွန်သေးငယ်သော linear အမျိုးအစား ergonomic ဒီဇိုင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့လွယ်ကူစွာသွားခြင်း။
8.Powerful ကြိတ်ခွဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု function ကို
9. ယုံကြည်စိတ်ချရသောစက်ပစ္စည်းများ၊ ရေရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်
ရှေ့သို့ JHPRO JH-65B ဖြိုဖျက်ခြင်း Jack Hammer လျှပ်စစ်ကွန်ကရစ်အပေါက်
နောက်တစ်ခု: JHPRO JH-80B POLER TOOL DEMOLITION HAMMER 1700W အရည်အသွေးမြင့်သောချိုးဖောက်သူ
1520w / 1700w High Power Hammer
65mm ဖြိုဖျက် Hammer
Jiahao ဒီဇိုင်း JH168 လျှပ်စစ်ဖြိုဖျက်မှု Jack H ...
Chisel-bits လျှပ်စစ် Demoli ၂ ခုပါသော JHPRO JH-150 ...
JHPRO JH-100A ပါဝါကိရိယာစက်ရုံလျှပ်စစ် chis ...
JHPRO JH-95 လျှပ်စစ်ဖြိုခွဲခြင်း Jack Hammer Con ...
JHPRO JH-180 လျှပ်စစ်ဖြိုခွဲ Hammer Heavy D ...
JHPRO JH-86 လျှပ်စစ်ဖြိုခွဲခြင်း Jack Hammer Con ...